Somaliland: Wasiirka Arrimaha Dibedda Oo Bogaadiyay Warbixintii Goobjoogayaashii Caalamiga Ahaa - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Arrimaha Dibedda Oo Bogaadiyay Warbixintii Goobjoogayaashii Caalamiga Ahaa
Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland oo Shir-jaraaid xafiiskiisa ku qabtay ayaa Bogaadiyey Warbixinta Goobjoogayaasha Caalamiga aha.
Wasiirku waxa uu bogaadiyey Warbixinta Goobjoogayaasha Caalamiga ah oo gaadhay 6-da Gobol ee Somaliland, wasiir Sacad ayaa sidoo kale bogaadiyey Saddex xisbi qaran ee Somaliland iyo taageerayaashoodaba.
wasiir sacad ayaa waxa kale oo uu sheegay in warsaxaafadeedka ay soo saareen Goobjoogayaasha caalamiga ah ay ku xuseen in Jamhuuriyadda somaliland ay doorashaddu uga dhacday si xor ah oo xalaal ah guud ahaan.
Wasiir Sacad waxa uu intaa raaciyey in ay tahay in loo mahadnaqo Dawladihii iyo Hay’adahii Somaliland ka caawiyey Qabsoomidda Doorashadda Somaliland.
Wasiirka Arimaha Dibadda Somaliland waxa uu intaa ku daray in Doorashaddan Somaliland habka ay u dhacday in ay waxbadan ka badali doonto halka caalamku ka taagnaa qadiyadeena iyo xidhiidhkeena.
Wasiir Sacad ayaa sheegay in ay doorashaddani muujisay Bisaylka Somaliland, waxa uu sheegay in ay markhaati ka tahay dimuqraadiyadda Somaliland.
Wasiir Sacad ayaa ugu baaqay in Bulshadda Caalamku ay Ixtiraamaan Dimuqraadiyadda iyo Rabitaanka Shacabka Somaliland, isla markaan ay aqoonsadaan.